ReRunners dia mametraka anao eo alohan'ireo hazakazaka mifanohitra amin'ireo mpilalao hafa ao amin'ny 2D | Androidsis
Mifaninana amin'ireo mpilalao hafa amin'ny hazakazaka 2D malaza ao ReRunners
Nametraka antsika ny mpihazakazaka tsy misy farany alohan'ny tessitura tsy mijanona mihazakazaka mandra-pahatongan'ny fahitana fa tsy misy fetra ny haavony ary ny isa azontsika sy ireo toetra na hery azontsika sakanana dia zava-dehibe kokoa. Raha esorintsika ilay teny hoe "tsy misy farany" dia mijanona ho mpihazakazaka izy, noho izany dia sisa tavela amina lalao video isika izay mila mihazakazaka toy ny rip miaraka amin'ny haavo heverina fa misy farany. Raha ampiantsika ilay "mpihazakazaka" ilay "mpihazakazaka" dia hahita andiana mpilalao isika, na ampiarahina na tsy ampiarahina, izay tsy maintsy hokapohintsika mba ho mpilalao mahay indrindra eto an-tany. Betsaka na latsaka io no aroson'ny ReRunners.
ReRunners dia lalao horonantsary marobe mpifaninana izay tsy maintsy ananana mahazo ny toerana voalohany hahazo hery sy fahaizana tsaratsara kokoa. Lalao iray ahitàna ny atiny isan-karazany manana haavo miloko maherin'ny 60, endri-tsoratra marobe hamaha, zavatra marobe ampiasaina hanoherana ny fahavalo sy fomba fijery tena Retro, mametraka antsika eo alohan'ny iray amin'ireo lalao tsy misy ahiahy indrindra ananantsika hita nandalo an'ireto andalana ireto tato anatin'ny volana vitsivitsy. Amin'izany fanaingoana izany, miaraka amina endri-tsoratra izay mety hahatadidy ireo an'ny Maniac Mansion an'i Lucas Arts, ity lalao video ity dia hanandrana hahatonga ireo hazakazaka ireo ho lasa adala kokoa.
1 Mihazakazaha haingana
2 Miaraka amin'ny fihodinan'ny RPG
Tsy maintsy misafidy toetra ianao izay hisolo tena anao ary iza no ho andefasanao lesona iray izay hatolotra anao ny lalao fototra. Tafiditra ao anatin'izany ny fahalalana fa azonao atao ny mamoha fahaiza-manao fanampiny ho an'ny maherifonao toy ny mitsambikina indroa na ny fahaizana mihazakazaka haingana kokoa mandritra ny segondra vitsy amin'ireo hery maro hafa. Aorian'ny fampianarana dia ho afaka hifaninana amin'ireo mpilalao hafa amin'ny fomba namboarina ianao, noho izany ReRunners dia manana singa multiplayer lehibe izay manintona be dia be.
Ary tsy amin'ny fanaingoana sy ny lafiny multiplayer ihany izy io, fa ny haavony, mihoatra noho ny 60Apetrany eo amin'ny makarakara ny hena rehetra mba hahafahanao mankafy be ny hazakazaka tsirairay ary miandry azy hamita vao hanomboka iray hafa. Raha te handresy amin'ireo hazakazaka ireo ianao dia tsy maintsy hahafantatra ny fomba fampiasana ny hery izay hamohanao amin'ny fomba marina handresena ireo mpifaninana aminao. Ireo hery ireo dia tsy maintsy sokafana, ary amin'ny maha maodely freemium anao, azonao atao ny manana azy ireo avy hatrany raha manao micropayments ianao ao anatin'ny fampiharana, raha tsy izany dia mila miandry ianao mandritra ny fotoana fohy.
Miaraka amin'ny fihodinan'ny RPG
ReRunners dia manana fahaizana hampiakatra ny haavon'ny ny maherifonao, noho izany dia manana kely an'io singa RPG io izy, na dia mijanona ao fotsiny aza io. Azonao atao ihany koa ny manatsara ny fahaiza-mianatra ianaranao, mba hahafahan'ny maherifonao miatrika mpifanandrina hafa miaraka amin'ny tombony kely. Ary ahoana no mety hitranga raha tsy izany, azonao atao koa ny manamboatra ny endriny hanavahana ny tenanao amin'ireo mpilalao hafa.
Lalao video iray izay atiny be dia be ary azonao zahana mandritra ny ora maro. Ny marina dia fantany ny fomba filalaovany ny karany mba tsy hijanonana amin'ny hazakazaka mahafinaritra fotsiny, satria mahery vaika izy ireo, fa manolotra fanaingoana, fampiakarana, fanatsarana fahaizana ary ambaratonga maro hilalaovana izy. Manana izany maimaim-poana ianao avy amin'ny Google Play Store miaraka amin'ny micropayments mazava ho azy izay mamela anao hitahiry fotoana amin'ny fanatsarana sy ny hery hafa ho azon'ny mpivarotra anao.
ReRunners dia manana mijery tsara amin'ny pixel retro izay afaka manao antsika hamerina ireo fotoana nostalgia ireo ho fahatsiarovana antsika. Ankoatr'ity fiteny hita maso ity dia mahomby tokoa ireo endrika amam-panahy ary manana kalitao lehibe mitovy amin'ny protas an'ny Maniac Mansion. Ho an'ny ambiny, manana kalitao tsara iray manontolo izy io mba hitondra antsika mpihazakazaka Arcade tsara hahafinaritra amin'ny fifaninanana amin'ireo mpilalao hafa.
Ny endriny Retro Maniac Mansion
Ny toetrany adala
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mifaninana amin'ireo mpilalao hafa amin'ny hazakazaka 2D malaza ao ReRunners
Shaw Ptc dia hoy izy:
bro mila anao aho hanampy ahy amin'ny pokemon aloako anao!
Mamaly an'i Shaw Ptc
andefaso boaty inbox aho
Nisaintsaina ny hahazo android vaovao aho, nieritreritra ny handeha tamin'ity zotra ity.
Mpankafy smartphone lehibe indrindra eran-tany eto
Avy amin'ny mpamorona Dots roa no misy ny Dots & Co, ankamantatra mahafinaritra sy mampiankin-doha
Ulefone Metal, finday avo lenta tsy mampino latsaky ny 100 euro